WARARKA BARAAWEPOST Khamiis 17 january 2013<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
200 askari oo ka tirsan ciidanka booliska oo tababar loogu qaaday dalka Jabuuti
Taliska ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa maanta tababar u diray laba boqol oo askari kuwaasoo muddo saddex bilood ah tababar loogu magac daray Public Order Management ku soo qaadan doona Dalka Jabuuti.
Munaasabad lagu sagootinayay askartan ka tirsan ciidan Booliiska Soomaaliyeed ee tabarka loogu qaaday dalka Jabuuti oo ay ka qayb galeen Taliyaha Akadeemiyada Booliiska General Kaahiye, Taliyaha ciidanka Booliiska Soomaaliyeed,wasiiru dowlaha wasaarada arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka iyo mas�uuliyiin kale ayaa waxaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
Taliyaha Akadeemiyada dugsiga tabarka ciidanka Booliiska Soomaaliyeed General Kaahiye S/guuto Axmed Dayib �Dhagacaleen� oo hadal ka jeediyay goobta ayaa sheegay in ciidanka tababarka loo qaadayo ay yihiin 204 askar oo isugu jira saraakiil saraakiil xigeen alifley iyo dabley kuwaasoo 16 ka mid ahna ay yihiin Dumar ayna tabarkaasi ku soo qaadan doonaan Muddo seddax bilood ah dalka Jabuuti.
Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed S/Gaas Shariif Sheekhuna Maye oo isna ka hadlay munasaadda lagu sagootinayay ciidanka ayaa xusay in askarta iyo saraakiishan ciidanka booliska loo soo barayo sugidda ammaanka, ka hortagga iyo la dagaalanka argagixisada, miino baarista, habka loo baaro dambiyada iyo waxyaabo kale.
Taliyaha ciidanka Booliiska ayaa intaa ku daray in tababarkaan ay maal galineyso dowladda Talyaaniga macallimiinta bixinayana ay yihiin kuwa ka socda booliska talyaaniga gaar ahaan booliska sida militeriga u tababaran ee loo yaqaan Carabinieri ayna martigelineyso dowladda aynu walaalaha nahay ee Jabuuti, isagoona askarta kula dardaarmay in ay dhowraan sharciga ciidanka Qaranka.
Ugu dambayntii wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka Mahdi Maxamuud Cali oo dardaaran dheer u jeediyay askarta iyo saraakiisha gaaraysa 204 ayaa tilmaamay in ay nasiib u yeesheen in ay ku soo tababartaan dal aan walaalo nahay oo dadka ku nooli ay iskaga mideysan yihiin midabka,diinta, afka iyo dhaqanka isagoon intaasi raaciyay in ay muhiim tahay in ay dib ugu soo laabtaan dalkooda iyaga oo aqoon leh.
Tababarkan ay bixinayaan ciidamada booliska talyaaniga ee carabinieri ayaa wuxuu fursad weyn u yahay ciidamada ka qayb galaya maaddama ay qaadan doonaan tababaro iyo farsamo casri ah lana filayo mustaqbalka marka ay dalka ku soo laabtaan inay kaalin weyn ka qaataan soo celinta amniga iyo kala dambeynta dalka.